Waa muhiim in la ogaado | vfxAlert official blog
Tiro badan oo tilmaamayaal ah, jaantusyo adag iyo dillaaliin badan oo aan daacad ahayn ayaa ka dhigaya barashada xulashooyinka binary aad u adag.
Kuwo badan ayaa gacmahooda ku tijaabiya ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah , laakiin halmaamay hal shay oo muhiim ah - aragti la'aan iyo fahamka sida ay u shaqeyso, guusha ganacsiga lama gaari karo, in kasta oo xaqiiqda ay tahay mid aad u fudud jaleecada hore.
Istaraatiijiyad ganacsi ayaa ah habka kaliya ee lacag looga dhigi karo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah. Fursado badan oo dakhli oo kala duwan ayaa horay loo abuuray loona sharaxay; inta badan qaababku waxay si fiican uga caawiyaan ganacsadaha inuu u wareego arrintan.
Waxay ku saleysan tahay istiraatiijiyadda uu ganacsaduhu qorsheynayo tilmaamayaasha ay ku socdaan, maxay yihiin calaamadaha iyo nalka uu isticmaali doono. Boggayaga, waxaad ka heli doontaa dhowr istaraatiijiyad shaqo oo loogu talagalay ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah iyo calaamadaha bilaashka ah ee ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah.
Kuwani waa qalab aad u wanaagsan oo lagu barto sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah. Xusuusnow, haddii aad tahay qof bilow ah oo dhammaystiran, waxaan kugula talineynaa inaad ku bilowdo koontada demo iyo calaamado bilaash ah, daraasad mid ka mid ah istiraatiijiyadda oo aad naftaada u dooratid hal istiraatiijiyad oo adiga kugu habboon.
Waxaan kuu soo daabaceynaa dhowr istiraatiijiyad:
Dhaqaaqa Tunnel Celcelis + MACD + Calaamadaha loogu talagalay ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah
Kooxda Bollinger + Stochastic
Kooxaha Bollinger & RSI
Calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah waa aasaaska istiraatiijiyad ganacsi iyo ganacsi guuleysta. Tani waa qayb ka mid ah shakhsiyaadkaaga, istiraatiijiyad ganacsi oo gaar ah .
Ganacsatada bilowga ah waxay talaabo talaabo u baranayaan aragtida, iyagoo adeegsanaya calaamadaha, waxay bartaan istaraatiijiyado ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh, ku celcelin, dhisida xaddiga lagama maarmaanka u ah xirfadaha. Dhamaan ficiladan waxaa loo sameeyay istiraatiijiyad ganacsi oo gaar ah oo ganacsadaha ah.
Si loo abuuro faa'iido, calaamadaha ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah waxaa adeegsada kuwa bilowga ah iyo ganacsato guuleysta, maaddaama ay astaamuhu kuu oggolaanayaan inaad saadaal ka bixiso isbeddelka sicirka.
Khariidadaha kuleylka waxay muujinayaan sida saxda ah ee calaamaddu u leedahay isla markaana haysato sawir dhammaystiran oo falanqaynta ah indhahaaga hortiisa hal daaqad oo ay la socoto dallaalku, ganacsadaha ayaa samayn kara saadaal sax ah oo ku saabsan macaamil ganacsi.
Boggeena, waxaad ka heli doontaa qalabka lagama maarmaanka u ah ganacsade laylis. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in bilowga ganacsigu yahay barashada aragtida, ka dibna kaliya lagu dhaqmo oo la raadiyo qalab ku habboon.